Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah - Kinne Maskinteknik AB
Baaxadda iyo oggolaanshaha
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaan u adeegsanaa ereyga "xog shaqsiyeed" si aan ugu sharaxno macluumaadka si toos ah ama si aan toos ahayn u aqoonsan kara qof dabiici ah.
Adigoo aqbalaya Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaad ogolaatay inaan ururin karno, adeegsan karno, shaaca ka qaadno oo aan keydin karno xogtaada shakhsi ahaaneed sida lagu sharxay Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah.
Maareeyaha macluumaadka shaqsiyeed
Ururinta xogta shaqsiyeed
Haddii aad wax iibsasho nala sameysid ama aad nagala soo xiriirto boostada, taleefanka, bandhigyada ganacsiga ama booqashada ka dib waxaad ogolaatay inaad la wadaagto macluumaadkaaga shaqsiyeed isla markaana ogolaato in macluumaadkaas la gudbin doono oo lagu keydin doono adeegyadeena Sweden.
Waxaan kaydinaa noocyada soo socda ee macluumaadka, magaca, cinwaanka, lambarka boostada, cinwaanka boostada, cinwaanka emaylka, lambarka taleefanka, nambarka taleefanka gacanta,
Waxaan ku kaydineynaa macluumaadka noocan ah ee aad siiso websaydhadeena ama inaad na siiso xiriir laxiriira inaad nagala soo xiriirto boostada, telefoonka, xafladaha ganacsiga ama booqashooyinka. Tan waxaa ka mid ah:
magaca, cinwaanka, boostada, magaalada, waddanka, cinwaanka emaylka, lambarka taleefanka, nambarka mobilka.
macluumaadka gaarsiinta, macluumaadka biilasha, macluumaadka lacag bixinta iyo macluumaadka kale ee aad bixiso ee ku saabsan iibsashada ama keenida shey iyo, haddii adeegyada gaarsiinta la bixiyo iyada oo loo marayo mid ka mid ah nidaamyadeena isku dhafan, macluumaadka gaarsiinta kale ee la xiriira (heerka gaarsiinta) ee uu keydiyay lamaanaha gudbinta ee la xushay;
macluumaadka la bixiyo ee la xiriira wadahadalada ku saabsan shirarka, taleefanka, wada sheekaysiga, xallinta khilaafaadka, is-waafajinta websaydhyada ama waraaqaha noo soo diray.
Adeegsiga xogta shaqsiyeed
Ujeedada macluumaadka ayaa ah inaad awood u yeelato inaad wax iibsato waxaanan ku siin karnaa adeegga macaamiisha.
Adigoo aqbalaya Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah waxaad xaqiijineysaa inaan u adeegsan karno macluumaadkaaga qaaska ah si:
ka hortagga, ogaashada iyo baarista khayaanada, shilalka amniga, suurtogalnimada mamnuuc ama howlo sharci darro ah.
isbarbar dhiga macluumaadka si loo xaqiijiyo saxsanaanta loona caddeeyo dhinacyada saddexaad;
ku siin doonaa adeegyo kale oo aad codsato oo lagu sifeeyay markii aan aruurineyno macluumaadka; iyo
ka jawaab codsiyadaada, tusaale ahaan inaan kula soo xiriirno su’aal aad u dirtay adeegga macaamiisheena;
Adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed ujeeddooyinka suuqgeynta
Marka la helo ogolaanshahaaga iyadoo la raacayo qawaaniinta lagu dabaqi karo iyo Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah, waxaan u istcimaali karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed;
in aan kugu wargalinno wax soo saarkayaga iyo adeegyadayada;
dir diirimaad la bartilmaameedsado iyo dalabyo xayeysiin ah oo ku saleysan waxyaabaha aad doorbidayso;
oo habaynno adeegyadeena
Kama iibinno ama uma shaacino macluumaadkaaga shaqsiyaadka kuwa saddexaad ujeeddooyin suuqeed.
Jooji adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed ujeeddooyinka suuqgeynta
Haddii aadan jeclayn inaad ka hesho suuq-geynta iyo dalabyada xayeysiinta ah ee naga yimaada, noo soo sheeg iyada oo loo marayo sales@kinnemaskinteknik.com.
Waad aqrin kartaa annaga siyaasadda cookie Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo adeegsado bogaggan internetka.
Siidaynta macluumaadka shakhsiyeed
Waxaan shaaca ka qaadnaa macluumaadka shakhsiyeed si aan u fulinno waajibaadka sharciyeed. Macluumaadka noocan oo kale ah waxaa la shaacin doonaa iyada oo la raacayo shuruucda iyo qawaaniinta lagu dabaqi karo.
Waxaan la wadaagi karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed:
Qandaraasleyaasha naga caawiya socodsiinta ganacsiga (sida, laakiin aan ku xaddidnayn, adeegga macaamiisha, baaritaannada musuqmaasuqa, ururinta qaansheegadka, xawaaraha iyo hawlgalka websaydhka).
Awoodda kormeerka, maamulka booliiska, ama cid saddexaad oo la oggolaaday, inay ka jawaabaan su'aalaha la xiriira baaritaanka dambi ama fal sharci darro ah ama howlo kale oo sababi kara annaga ama adiga. Xaaladda noocaas ah, illaa xadka uu oggol yahay sharciga lagu dabaqi karo, waxaan shaaca ka qaadi doonnaa macluumaadka ku habboon oo lagama maarmaanka u ah baaritaanka, sida magaca, lambarka amniga bulshada, magaalada, gobolka ama gobolka, cinwaanka boostada, lambarka taleefanka, cinwaanka emaylka, taariikhda username, cinwaanka IP, dacwada khiyaamada iyo taariikhda iibka.
Shirkadaha ka warbixiya amaahda oo aan uga warbixin karno macluumaadka ku saabsan iibsashadaada, lacag-bixintaada, ama jebinta kale ee koontadaada ee ka dhex muuqan kara warbixintaada deynta ilaa xadka sharciga uu oggol yahay.
Shirkadaha kale waa inaan ku biirnaa ama helnaa shirkad noocan ah. Hadday taasi dhacdo, waxaan u baahan nahay shirkadda cusub inay u hogaansanto Nidaamkan Qarsoodiga ee ku saabsan ka baaraandegidda xogtaada shaqsiyeed. Haddii macluumaadkaaga shaqsiyeed loo istcimaali doono ama loo shaacin doono ujeedo kasta oo aan ka ahayn sida lagu sheegay siyaasadan, waanu kula soo socodsiin doonnaa arrintaas, haddii ay quseysona waxaan codsan doonnaa oggolaanshahaaga.
Beddelka xogta shaqsiyeed
Waxaan ku keydisaa oo aan socodsiineynaa xogtaada shaqsiyadeed shaqaalaheena Sweden.
Amniga iyo kaydinta xogta shaqsiyeed
Waxaan u isticmaalnaa tallaabooyinka amniga jidheed, farsamo iyo abaabul, ee la xiriira qaddarka iyo xasaasiga xogta shaqsiyeed, si looga hortago hawlgal aan la oggoleyn, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidneyn marin u helka aan loo fasaxin, helitaanka iyo adeegsiga, luminta, tirtirka ama waxyeelada macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaalaha. Tallaabooyinka amniga qaarkood ee aan u isticmaalno waa dab-damis, ka-hortagga fayraska, xakamaynta marin-u-helka iyo ilaalinta jidheed ee qaab badbaado badbaado / badbaado leh.
Tirtirka macluumaadka iyo xafidaada macluumaadka shaqsiyeed
Markaad codsatid iyo sida ku xusan qodobbada qaybtan, waxaan tirtiri doonnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed sida ugu dhakhsaha badan ee suurogalka ah. Tirtirka macluumaadka waxaa loo sameyn doonaa si waafaqsan sharciga quseeya.
Waxaan hayn karnaa macluumaadka shakhsiyeed ee la xiriira dadka iyo shirkadaha haddii:
waxaan leenahay dano ganacsi oo sharci ah mana ka mamnuucno sharciga, sida dib u soo celinta khidmadaha wakhtigii la soo dhaafay, xallinta khilaafaadka ama
waxaa nagu waajib ah inaan haynno macluumaadka shaqsiyeed si aan u fulinno waajibaadka sharci ee ay ka midka yihiin u hoggaansanaanta sharciga maxalliga ah, khayaanada iyo lacagta la dhaqay, ama inaan qaadno tallaabooyin kale oo sharcigu oggol yahay.
Xaaladahan oo kale, macluumaadka shakhsiga ah waxaa loo maareeyaa si aamin ah oo keliya illaa inta loo baahan yahay.
Marka la eego xayiraadaha lagu soo rogay sharciga ilaalinta macluumaadka EEA, waxaad leedahay xuquuqo gaar ah oo laxiriira macluumaadkaaga shaqsiyeed. Waxaad xaq u leedahay marin-u-helid, sixitaan, xaddidid, diidmo, tirtir iyo xaddiditaanka xogta. Fadlan nala soo xiriir haddii aad jeceshahay inaad isticmaasho mid ka mid ah xuquuqahaan. Haddii aad jeclaan lahayd inaad codsato marin u helitaanka dhammaan macluumaadka shakhsiyeed ee aannu kaa hayno, fadlan la soco in aqoonsi sawir oo la oggolaaday loo baahan doono si loo caddeeyo aqoonsigaaga.
Waad awoodaa nala soo xiriir khadka tooska ah wakhti kasta. Haddii su'aalaha aan looga jawaabin khadka tooska ah, waxaad noogu soo qori kartaa: Kinne Maskinteknik AB, Förlagsvägen 3, 533 74 Hällekis, Sweden.
Haddii aadan ku qanacsaneyn sida aan wax uga qabanno su'aalahaaga, waxaad xaq u leedahay inaad cabasho u gudbiso Baaraha Baadhitaanka.